Mbappé oo farriin gaar ah u diray Benzema kaddib markii uu qandaraaska u kordhiyay PSG – Gool FM
(Paris) 24 Maajo 2022. Xiddiga kooxda Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappé ayaa farriin gaar ah u diray saaxiibkiis ay ka wada tirsan yihiin xulka qaranka France ahna gooldhaliyaha ugu sareeya naadiga Real Madrid ee Karim Benzema.
Hadalka Kylian Mbappé ayaa yimid kaddib markii lagu dhawaaqay kordhinta qandaraaska uu kula jiro kooxda Paris Saint-Germain, si loo soo afjaro wararka la xiriirinaya inuu u dhaqaaqayo kooxda Real Madrid.
Benzema ayaa kula falgalay warka ku saabsan kordhinta qandaraaska Mbappe, in uu bbartiisa Instagram-ka ku soo daabaco sawirka fannaaniinta Mareykanka ah ee Tupac iyo saaxiibkiis khaa’inka ahaa, isaga oo kala jeeday inuu ku canaanto xiddiga kooxda Paris.
Wargeyska Marca ayaa daabacay farriinta gaar ah uu Kylian Mbappé u diray saaxiibkiis Karim Benzema, wuxuuna yiri:
“Go’aankeyga waxaan u sharixi doonaa Benzema isaga oo jooga xerada xulka qaranka France.”
“Waxaan arkay dhowr daabacaad oo ay daabaceen ciyaartoyda Real Madrid.”
“Ma jirto wax aan dhaho, dabcan marka aan aado xulka qaranka France, waxaan u sharixi doonaa Benzema sababta aan u go’aansaday inaan sii joogo Paris Saint-Germain, sababtoo ah xiriirkeena waa mid wanaagsan.”
“Riyadaydu waa inaan noqdo kan ugu fiican? Si aad sidaas u ahaato, waa inaad qortaa taariikhda, ku guulaysataa koobab shaqsi ah iyo mid guud, oo aad dadka ka dhigtaa kuwa raaxaysanaya, sababtoo ah kubadda cagta maaha koobab kaliya ee waa dareen.”
“Kubadda cagta maaha kaliya in la dhaliyo gool ama ku guulaysiga Ballon d’Or ama Champions League, waxa jira waxyaabo badan oo la xiriira garoonka dhexdiisa iyo banaankiisa sida inaad noqoto mid ixtiraam leh.”